फेसबुकमा फत्तेमाया | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 03/07/2010 - 16:36
हराएका मान्छे भेटिए भटाभट हो, थुपैैर मान्छेहरू हराएका थिए । हृदय र शरीरहरू हराउने करम बढिरहेथ्यो । हिजोआज ती भेटतै छु बिस्तारै-बिस्तारै ।
सूचनाको जालोले नबेरएिको घर रहेन । खबरको अँगालोबाट अलगगिएको पिँढी अछुतो रहेन । अनि घर र पिँढीबाट डोरिएर पुगेका परेलीले मौनतामा बाँधने कुरै भएन ।
मेरा आँखामा उसतै-उसतै छ समयको इन्द्रेणी मैले त्यो इन्द्रेणीमा माझिएर, थपिएर, गुजुलटिएर अनि मिसिएर नयाँ मौसम भितरिरहेको कुतीकुती पढिसकेको छैन । समयले किन कुथरयो मलाई ∕ ऊ सूचनाको नयाँ लुगामा आइसकेछ ।
म त उसलाई बूढो हुलाकीका सवाँ-सवाँमा खबर परखिरहथे, ऊ आइसकेछ फेसबुकमा हराउनेहरू चुपचापसँग हराउँथे काम खोजदै जानेहरू हराएका थिए लन्डनतिर । कामको भारले छोपिएका थिए सिड्नीतिर । दामको भोकले बिलाउँथे न्युयोर्कतिर । नोटको बोझले अलझिइएका थिए बेइजिङतिर ।
ती सबै भेटिन्थे फेसबुकमा ।
अचेल घरबाट साटसुटट जानेहरूलाई भेटिरहेछु अनेक रूपमा । देखिरहेछु अनेक ढंगमा । धेरै वरषको बेखबर अनुहार नजिक छ यतिखेर ।
मेरा छातीभरि थुपरै भुमरी उमारी-उमारी फेसबुकका तस्बिरले हुत्याउँछन जिज्ञासाहरू अपेक्षाहरू, सोधाइहरू । लामा र गहिरा कुरा आएका हुन्छन, पर... संसारबाट । मैले दिनै नसकने कुरा फेसबुकले बोकेर लयाएका कौतूहलले केरकार पार्छन । र, म हारेको पो छु त ।
"मामा, बन्द नहुने स्टोरको कमाइमा बाँचेको छु नि " अस्टरेलियाको भानजाले फेसबुकमा जीवन पोखे ।
कृषिका तिनी मापाका थिए । हाँगा-हाँगा जोडेर नयाँ फलाउने खुबै खट्थे तिनी । बगरमा, बदाम, सखरखण्ड र गोल काँकरो तिनले फलाउँथे बालुवा जोतेर ।
"तक्मा त मन्त्रालयकै बाबुसाहेबले लाएछन " भान्जाले आफनो विरकति फेसबुकमै पोखे ।
पौरखी भासिएर गएको एउटा सानो स्वर थियो यो । पसिनाको उपेक्षित बोली थियो यो । मसँग स्तब्ध हुने मनको तहमा थपियो अरू एक पंक्ति ।
फेसबुकमा भेटिनेहरू बढेकाबढेकै छन ।
तिनका सम्भाव्य जीवन र प्राप्ति म निरनतर पढिरहेकै छु । समयलाई भेटन र खोज्न दगुरेका परेली म हेरिरहेकै छु । अनन्त सपनाका खातमा तिनले उभिएर चाकाचुली खेलेको देखिरहेकै छु म ।
"काका, आमाको दाहसंस्कारमा आउन सकिनँ । हुने हुनामी भइहालयो । मैले अरू चुनौती भोग्नुपर्छ फर्के भने..." टोकियोमा रहेको भतिजो भन्दैछ फेसबुकमा ।
संवेदनाको सबभनदा नालायकी प्रतिकृया हो, मेरा निम्ति यो । वरतमानको पराजित अनुहारको शृंखलामा थप प्रमाण । हराइरहेको दृष्टि र अनयोल धुकधुकमा फेसबुकको यो भनाइ मार्मिक ठान्छु । जीवनभन्दा अर्को उजयालो तर्क र सिद्धान्त मान्नै सक्तिनँ म ।
कति छिटो-छिटो फडको छ प्रविधिको ।
हरेक मिनेटमा मैले किनेका विद्युतीय सामान पुरानिन्छन र घटेका मूल्यमा एकदमै सुविधा र सभ्यतालाई पार्छन असाध्यै सजिलो । छिनमा मेरो हातमा लयाइदिन्छ विज्ञानले नयाँ-नयाँ आविष्कार । नौलो सामग्रीले दिने आनन्दी । अनि सहज जीवनको उमंग ।
हिँडिरहेकै हो बाटो । तरिरहेको हो जँघार । काटेकै हो उकाली । चढाएकै हो फूलपाती ।
फेसबुकमा यी सबैबारे अरू नयाँ आँखा, भावना र विमरशले परगेलने शक्ति भेटिरहेको छ । अचममले ती सबैलाई छामछु म, अथरयाउँछु म र नियाल्छु म ।
मेरा कानमा तयो आवाज थियो- लिथोग्राफीको, टाइप्राइटरको । नपतयाउँदो हललाले उसको तीवरताले हामीलाई सघाएथ्यो । साँचचै सहज जीवन पारेथ्यो हिजोका दिनमा ।
आज अरू हजार पाइला अघि आएर फेसबुकमा मलाई छुटेका मनसँग भेटघाट गरििदएको छ । मेरो स्वतन्त्रताको महान मूल्यलाई आत्मसात गरेको मान्छु म फेसबुकले ।
"मलाई घ्यूचाकुको खूब याद आउँछ । याँ काँ पाउनु ती सवादिला खानेकुराहरू "
बरलिनमा रहेको साथीले सांस्कृतिक कुरा लेखेछ फेसबुकमा ।
माघे संकरान्तिको ठिही छ । साथीले पोखेको औडाहालाई म फोटो खिचेर पठाउँछु र संवादलाई बयान गरछु पंक्तिमा । शब्दको उचाइ, गहिराइ र चौडाइ झन सर्वमानय भइरहेछ फेसबुकमा ।
एकमा एक घटाए एकै रहन्छ, महाकवि देवकोटाले भनेथे रे आफनो महानतम तर्क र सिद्धानतको व्याख्यानमा । वास्तवमा महामनाहरू खयालखयाल अनि खेलाँची बोलदैनन पनि, सौचदैनन पनि ।
अनन्त सम्बन्ध शृंखलामा आफनो परचिय गाँसिने फेसबुकको यो अद्भुत प्रविधि देवकोटाको व्याख्यान नजिक पुगेको ठान्छु म । मेरो परचिय वयापत पार्छ अनेकसँग जोडिएर, टाँसिएर अनि गाँसिएर ।
यतिखेर म कदापि टाढा छैन ।
मसँगै बस्तीमा लुकामारी खेल्नेहरू तननेरी उमेरमा विछोडिएका पनि अहिले भेटघाट फेरि बाक्लिएको छ । मसँगै बगरमा काँसका डाँठहरू चुसने पनि बैँशे बेलामा छुट्टिए पनि आजका दिनमा फेरि भएका छौँ एकै आँतका । आफनो छायाँ हाँसेको उमंगको बेला यो ।
मानिस हराउनु वा सम्बन्ध ओहरालो लागनु असाधयै चोटपूर्ण स्थिति मान्छु म । कति गहिराइ दुःखाइ वा संकटका पतरमा पाइला टेकनुपर्छ- एउटा मान्छे हराउँदा ।
समय, शरम, सौन्दर्य, सभ्यता र संसार चकमन्न बन्छ- मान्छे हराउँदा । मैले त्यस्तो पीडा पटक-पटक भोगेको छु । मनबाट भेटिएर गएका मानिसहरूको अभावले घरी-घरी व्याकुल भएको छु म ।
समाजको एउटा बेजोड मूल्य छ फेसबुकमा ।
भन्नु, सुन्नु वा सुनाउनु यी सूचनाका हिसाबले केही दरबिला पक्ष हुन । सामाजिक संसकारका बलिया सिँढी मानदै आएको तथय छ हामरै वरपर ।
त्यही कुरा व्यक्ति र सामाजिकी चासोमा पोखने - दुवै अधिकार पाएको छु मैले फेसबुकमा ।
यसरी प्रजातान्तरिक संस्कार सिकेँ प्रविधिबाट ।
उमेरको एउटा परहार र लखेटाइमा निकै परेँ म । ती जीवनका भयानक संघर्ण र रूपानतरणका क्षण मान्छु म । कति असरल्ल निर्णय र कति मौन प्राप्तिहरूका यी सबै चरणमा मैले गुमाएँ निकै मान्छेहरू ।
फेसबुकको त्यही जालोले एकपटक मान्छेसँग छुट्टिन नचहाने मेरो हृदयले पाएको छ प्रेमपूरण थपथपी ।
कारण त्यही हो- अनेक मान्छे, अनेक मन ।
यो एउटा मीठो स्मृतिले फेसबुकप्रति आस्था फैलाउँछ । धेरै हुन वा समूहगत वातावरणको ।
मेरो छिमेकी बच्चु भुजेल ।
ऊ कहिले जन्मियो, कहिले बढयो, कहिले हुर्कयो । पत्तो नभएको सहज वातावरणमा बच्चु सप्रियो । ठूलो परिवारमा आमा, काकी, ठूलीआमा वा अनेक काखमा शिशुव्य भयो सुखद, सुरक्षित र सस्नेही पनि ।
"हूलमा हुर्किन जत्ति आनन्दपूर्ण अरू के छ र ?"
उसको साधारण तर्क थियो ।
मेरा निम्ति यो अनौठो र अपत्यारिलो घरी-घरी हुन्छ । नहुने कुरा पनि भएन- सानो परिवारमा हुर्केपछि । संयुक्त परिवारमा हुर्किने मौका प्राप्त हुन सकेन मलाई ।
फेसबुक- अनुहारको एउटा अनन्यतम करमः ∕ मैले ती शृंखलाबाट महादेशका मौसम जान्न सकेको छु । मैले ती सम्बन्धहरूबाट महासागरका मनस्थितिहरू पढन सकेको छु । महादेश र महासागर त एउटै आँगनमा भेटिनु अझ अग्लो उपलब्धि हो ।
यतिखेरका मान्छेहरूलाई फेसबुक त्यही परचिय बन्दै छ दिनहुँ ।
मैले गृहकार्य सारेँ बिजुलेका कापीबाट । त्यही दिनदेखि ऊ र मेरो मन फाटयो । धेरै हिउँदले खोलाहरू संल्यायो ।
बिजुले आज खाडीको देशमा पहरा दिने काम गर्छ ।
मैले सूचनाको त्यही ताँतीमा उसलाई भेटेँ । उसले सनतरसत सिथतिलाई देखेँ । उसको विधवंसत दिनचरयामा उमिररहेको सन्त्रासको सिउँडी देखेँ ।
ख्यालख्यालमा करवीरेसँग ठोकाबाजी परेथ्यो ।
उसले मानेको नेता घ्यूबेचुवा थियो । मैले मानेको नेता तरबार बेचुवा थियो ।
हामरो असीम श्रद्धाका कारण तिनले बजाइरहे हामीलाई, जुधाइरहे हामीलाई अनि लडाइरहे । मुलुकका अनेक पँधेरामा बाझथयौँ हामी, गरामा जुधेथ्यौँ हामी, लडेथ्याँै हामी ।
कोरयिाबाट करवीरेले फेसबुकमा खबर पठायो, "हामीले देश चिनेछौँ, देशका हली चिनेन्छौँ "
मैले धेरै दिनसमम दौँतरी गुमाउँदाको उकुसमुकुसलाई हुर्काएथे आफनो शरीरभरि । आज तथ्य कुरा जान्ने साथी जोरेँ त्यही सूचनाको चौतारीमा ।
हारेको लामो दिनलाई जितेको उतसाहमा साटिएको लागिहेछ ।
प्रत्येक दिन उही लागछ । परतयेक अनुहार उसतै लागछ । परतयेक समय त्यही लागछ । तर, भिन्न महत्व र मूल्यमा ती परस्थापित छन । तयसको परमाण बाहिरएिका मनले बोलेका निष्कपट सवरबाट जाान्दछु म ।
यो चेपटो ठानिएको पृथ्वी यतिबेला झन सानो र हत्केलाभरिको लगिरहेको छ मलाई । अपार मानिएको यो धरती झन-झन साँगुरिएर नजिक बनेको ठान्दैछु म ।
कारण सबभनदा सजिलो छ ।
टाढा कोही रहेन । रहन्छु भनेर नेपथयमा लुक्नेहरू पनि हरेकका खबर्दारीमा गएका छन ।
फेसबुक, यहाँनिर विज्ञान नहारेको परमाण भेटिनछ । "चौतारीमा बसेर धेरै परका अगला पहाडहरूमा आँखा बिसाएर डङरंग लडेको कुरा यो अपारटमेनटमा मिस गरछु ।"
पाँचपटकसमम अंग्रेजीमै फेल भएकी फत्तेमाया भेटिई फेसबुकमा । कता कसरी सियोल पुगी ऊ, खबर नखुलाए पनि- थाहा भो, देश कल्पेर भककानो छोड्नमा एक रहिछ ऊ पनि ।
"हामी धेरैले उतैका लाठेहरूसँग घरबार जोडयौँ । त्यततिकै हो नि भरबार त "
फततेमाया यो कुरा फेसबुकमा पढेपछि अर्थहरूको पछि कुँदे निकै नै ∕ शब्दको सामर्थ्य हेरेँ ।
अर्थको आयाम मनबाट मस्तिष्कतिर सारेँ ।
आँखा लागने अनुहारमा सुरक्षा कालो टीका लगाउने किशोरीजस्तो दर्शन पाल्दैछु ।
तर, गाजल लगाएर आँखै मन पर्यो रे दुनियाँलाई एउटै थालमा भात खानेहरू भेटिन्छन । एउटै पिङमा लठारिनेहरू भेटिन्छन । एउटै पाटीमा अक्षर कोरनेहरू भेटिन्छन । एउटै उखु दुईतिर चुस्नेहरू भेटिन्छन । एउटै सिरानी दुईतिर बाँडेर सुत्नेहरू भेटिन्छन ।
फेसबुकमा यी सबै अनुहार भेटिन्छन पटक-पटक ।
कोही न कोही कतै न कतै कसै न कसै सम्बन्धमा उनिएर आउँछन । तिनको आगमन सहसा जति हुन्छ- ती कुनै समय जयादै रहस्यमयी भाए हराएथे । चुपचाप हराउनेहरू यतिबेला ठूलो होहललासँग भेटिरहेछन फेसबुकमा ।
देशब्ाट पराधयापकहरू हराएथे । कलाकारहरू बेपततिएथे । वैजञानिकहरू लपता भएथे । शिकषकहरू लुपत भएथे । कविहरू बिलाएथे ।
देशबाट परदेश पस्ने अनुहारको खोजी उही आफ्नाहरूका लागि खल्लो भयो, धेरैपटक । हारगुहार कतिन्जेल गरने ? हराउनेहरू बोलदैन थिए । हराएको ठान्नेले उत्तर नपाएको तीतो समय आउँथ्यो, फेरि पनि आइरहनथ्यो ।
नयाँ खबर धेरै थियो देशमा ।
मानिसबाट मान्छेको तह गिरेको अतिशय चोट बढिरहेको थियो जताततै । मैले सहर र बसतीका धेरै गोरेटोमा हराएका मान्छेको तस्बिर टाँसेका थिएँ । मैले घना बसती र आवादी बजारबाट नामी-नामी अनुहार सुटुकक अनतै गएको जानकारी पाएँथेँ ।
के रोकने सीमा छैन ?
यो अकलपनीय सोधाइ धेरैपटक भएकै थियो । नआउने उततर हो भनने देशको सबै भागमा परशन थियो । तैपनि जिज्ञासा अनेक रूपमा आएर चक्कर लाउँथ्यो ।
फेसबुकमा एउटा संयोजित वाकय पढछु-
"संसार चिनेर आउँदैछु "
हराएकाहरू यति अनेक अवतारमा भेटिन्छन । संसारका ठूलाठूला सहरमा तिनका ओठ चलेका छन । भवय महानगरमा तिनका पसिना निकलिरहेका छन । दुनियाँका विराट बजारमा तिनका मस्तिष्क खिइरहेका औँलाका वेग र मनको आवेग हेरदा लागछ, आगो छ, हुरी छ र कमप छ तिनको वर्तमानमा ।
फेसबुक भन्छ- बाहिरै छ ठूलो नेपाल।
नेपाल साप्ताहिक ३८२
facebook ko barya ma sahi
अतिथि — Thu, 04/15/2010 - 09:09
facebook ko barya ma sahi lekhnu bho naya gharayji bahirai cha thulo nepal .............
अतिथि — Thu, 04/15/2010 - 09:10
वैरी नै तिमी भए पनि सकिन मेटाउन
जलकी रानी !
मन फुलाऊ जिन्दगी
दु:खै दु:खको आँधीले चुटे पनि
पित्तो जत्रो चित्त बोक्नेहरू
मिलनको झिनो आश
मेरो त ईज्जत...........................(मुक्तक)